Zingaki u-backlink udinga ukuthuthukisa ukubonakala kwewebhusayithi?
Kusukela ekuboniseni iphuzu lokubuka, inqubo yokuxhumanisa isixhumanisi ihlanganisa ukwakha ama-hyperlink kusuka eminye imithombo yewebhu kuwe ngokwakho ngezindlela ezihlukene zokwakha izixhumanisi ezifana nokuthumela ibhulogi, ukubeka amazwana ngemuva kokushicilela, ukukhishwa kwemishini kanye nokunye.Yonke le misebenzi ihlinzeka ukuthembeka kwekhredithi yakho futhi ikhulise idumela lakho lesizinda embonini yakho. Izinjini zokusesha ziphathelene nezixhumanisi ezikhomba isayithi lakho njengamavoti amadijithali kanye nenani elikhulu lamavoti onayo, indawo ephakeme yakho iyakuba kwi-SERP.
Nokho, empeleni akuwona wonke amavoti alinganayo. Kunezinqubo eziningi ze-spammy ezisebenzela ukukhohlisa izinjini futhi zithole isikhundla esiphezulu ngokuqukethwe kwekhwalithi ephansi. Noma kunjalo, izikhathi, lapho ungakwazi ukumane udale izixhumanisi eziningi ezisezingeni eliphansi ezizungezile isizinda sakho, asikho. Namuhla, i-Google nezinye izinjini ezinkulu zokusesha zilwa ngokuqinile nemisebenzi yokwakha isixhumanisi sokukhwabanisa njengokuxhumanisa ukuxhumanisa, izihloko ezifakiwe kanye namazwana webhulogi we-spammy. Muva nje, i-Google yasungula i-algorithm entsha yokusezingeni ngokuvumelana nazo zonke izici zangemva kwezinga eliphansi okufanele zisuswe. Uma kungenjalo, umthombo wewebhu ungaba yi-Deindexing noma i-Google, noma uthole izigwegwe eziholela ekutheni i-rankings drop. Yingakho, namuhla, ikhwalithi yezixhumanisi ezingenayo ihlonishwa kakhulu kunanani labo. Kusho ukuthi udinga ukuhlola igunya kanye nokuhambisana komthombo obeka isixhumanisi kuwe.
Uma kuziwa kwi-PageRank yomthombo wakho wewebhu, lokhu kunqunywa ukufakwa kwezixhumanisi eziza kusayithi lakho. Kusho ukuthi uma uxhumene namakhasi ewebhu nge-PR ephansi, i-PageRank yakho ngeke ikhule.
Yingakho i-backlink eyodwa yekhwalithi evela kwi-website ephezulu ye-PR izobiza ngaphezulu kunezinkulungwane zezinga eliphansi. Izixhumanisi ezisezingeni eliphansi ezisetshenziselwa abahlinzeki be-SEO abangasebenzi, abazitholayo ngemisebenzi yokwakha isixhumanisi, bakhohlisi kabi i-website yakho ye-SEO, kodwa futhi bachithe isithombe sakho sebhizinisi nedumela.
Ama-backlink ayigugu avela kumawebhusayithi ahlobene niche aphezulu PageRank azokwenza ibhizinisi lakho liphumelele futhi lisize izinjini ukusesha ukuthi isayithi lakho lithini.
Mangaki ama-backlink udinga ukubeka phezulu ku-Google?
Akunaso iphuzu lokuphakamisa lo mbuzo njengoba impendulo kuyo kuyoxhomeka embonini yakho kanye neminyaka yobudala. Isizinda esisodwa sidinga emuva kwamathrekhi angama-backlink amaningana aphezulu ukukala phezulu ekhasini lekhasi lokusesha, kanti esinye isizinda sidinga izixhumanisi eziningi ezingenayo ukuphakamisa igunya layo nokuthuthukisa idumela. Yiqiniso, kunezinye izimpawu eziningi ezisezingeni elifaka isandla kwisimo sewebhusayithi kwimiphumela yokusesha.
Ngabe yiziphi izinkinga ezingemuva?
Uhlobo oluhle lwe-backlink luyizixhumanisi zangaphandle eziphilayo. Bafika kusayithi lakho ngaphandle kokubuza kwakho futhi bathole uma ungalindeli. Lezi zixhumanisi zitholakala kubhulogi ezifanele nezithandwayo noma amawebusayithi ahlolisisa kakhulu okuqukethwe kwakho futhi anqume ukuwabelana nabafundi bawo. Njengomthetho, lezi zinhlobo ze-backlink zitholakala emithonjeni efanele yewebhu futhi zilethe eziningi zethrafikhi kusayithi elixhunyiwe.
Nokho, kunzima ukuthola izixhumanisi ezivela kumawebhusayithi athembekile kumakethe wakho emakethe. Umthombo wakho wewebhu kufanele ube nenani elikhulu kubasebenzisi futhi unedumela eliphakeme lokuthola ithuba lokuthola izixhumanisi ezingenayo ezivela kubaholi bemboni Source .